Akụkọ - Ndụmọdụ iri maka ndozi kwesịrị ekwesị
Kedu ihe jikọrọ elekere, skateboard na ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Ha nile na-adabere na bebi iji kwado mmegharị ntụgharị ha dị mma. Agbanyeghị, iji nweta ntụkwasị obi, ekwesịrị ịchekwa ma dozie ya nke ọma. Nke a ga - eme ka ọrụ ọrụ dị ogologo, na - egbochi ọtụtụ nsogbu ndị nwere ike ibute ọdịda na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. N'ebe a Wu Shizheng, onye isi njikwa na ọkachamara na-ebu soplaya, JITO Bearings, na-akọwa atụmatụ iri kachasị maka nlekọta kachasị mma.
1. Jikwaa ma chekwaa nke ọma
Iji zere ihe mmetọ gụnyere mmiri, uzuzu ma ọ bụ unyi na-abanye na ntaneti ahụ, a ga-edozi ha ma debe ha n'ụzọ ziri ezi. Nke mbu, ekwesiri ịchekwa bearings na nkwakọ ngwaahịa mbụ ha na gburugburu dị ọcha, akọrọ na ọnọdụ okpomọkụ. Mgbe a na-edozi ihe ndị na-enweghị isi, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ewepụla ihe mkpuchi ha n'oge na-adịbeghị anya, nke a nwere ike ikpughe ha na nsị ma ọ bụ mmetọ. Nta bụ ihe siri ike na iji nlezianya mesoo ya. Dị ka ndị dị otú a, a gaghị eji ihe ndị mebiri emebi mee ihe n'ihi na nke a nwere ike iduga ọdịda n'oge.
2. Jiri ndi okacha mara nma
Na mgbakwunye, ekwesịrị iji akụrụngwa kwesịrị ekwesị mgbe ị na-ejikwa bea. Ngwaọrụ na-abụghị ọkachamara maka ojiji n'oge amị na dismounting usoro nwere ike ime ka enweghị isi mmebi, denting na eyi. Ibu pullers ma ọ bụ itinye n'ọkwa kpo oku ihe atụ, e mere kpọmkwem maka biarin.
3. Lelee ebe obibi na-agba agba na osisi
Nyochaa ọnọdụ anụ ahụ nke ụlọ na osisi ahụ tupu ịbido na-agba. Jiri akwa dị nro hichaa ihe ndị ahụ ọcha, tupu ịmara onwe gị ụzọ nnabata ziri ezi.
4. Ugwu n'ụzọ ziri ezi
Shouldkwesịrị iji usoro ziri ezi mgbe ị na-agbakwunye bebi gị na nke a dịgasị dabere na ụdị agba na ụdị dabara. Enwere ike idozi ihe yiri mgbaaka nke radial na ụdị dị iche iche site na ịmịpụ dabara na njigide pịa siri ike, dabere na ụdị ibu, ọsọ na ọkwa vibration. Itinye mgbanaka na mgbanaka na-ezighi ezi mgbe ị dabara adaba nwere ike ịkpata mmebi nke ihe ndị na-agbagharị. N'otu aka ahụ, agbasaghị agbatị ma ọ bụ na-agbasasị ike, a ga-ezere mmezigharị na-adịghị mma na oche ndị na-ebu ma ọ bụ na gburugburu ma ọ bụ ụlọ.
5. Mee ka mmanu mmanu gị ka ọ dị mma
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka ọdịda na-ada bụ ọdịda mmanu. Nke a gụnyere iji mmanu na-ezighi ezi, yana iji oke mmanu ma ọ bụ obere mmanu. A na-ahọrọ mmanu ziri ezi site na ịtụle ọnọdụ gburugburu ebe obibi, ọnọdụ okpomọkụ, ọsọ na ibu. Onye ọkachamara na-amị amị ga-enwe ike ịdụ ndụmọdụ na lubrication egwuregwu kwesịrị ekwesị ma nwee ike ịchịkwa ịmị mmanụ na obere milligram ole na ole. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ka afọ jupụta mmanụ, nkịtị ma ọ bụ nke dị elu, ị ga-enwe nchekwa na ịmara mmanụ gị agaghị ebute nsogbu ma emechaa.
6. Zere okpomọkụ na-abụghị usoro dị na ya
Ọ bụrụ na ebu ígwè kpụ ọkụ n'ọnụ karịa oke a haziri maka ya, nke a nwere ike na-agbanwe ma ọ bụ dị nro na-ebu ihe na-adịgide adịgide, na-ebute mbenata ibu ibu ibu ma na-eduga na ọdịda akụrụngwa. Họrọ amị na adabara gị okpomọkụ ọrụ nso bụ nzọụkwụ mbụ. N'oge mmezi oge niile, lelee maka ịchọgharị mgbanaka ahụ, ihe ndị na-agagharị agagharị na ngịga, n'ihi na nke a nwere ike igosi oke ọkụ. Nke a nwere ike ibute nsonaazụ nke oke ịrụ ọrụ yana ịta mmanụ na-ezighi ezi ma chọọ nlebara anya gị ngwa ngwa.
7. N’ebe enwere ike, gbochie mmebi
Corrosion bụ onye iro nke biarin. N'ime oge, ọ bụrụ na bearings na-gụrụ mmiri, corrosion ga-eme. Nke a nwere ike iduga nchara na-abanye ọsọ ọsọ na n'ikpeazụ, akaghi aka na akụrụngwa akụrụngwa. Glogba uwe ga-eme ka ọsụsọ ma ọ bụ mmiri mmiri ndị ọzọ abanyeghị na ntanye ahụ. Mgbe ị na-emepụta kpọmkwem maka gburugburu corrosive, na-ahọpụta ụzọ kwesịrị ekwesị bụ isi. Dịka ọmụmaatụ, ịhọrọ maka igwe anaghị agba nchara 316 nwere akàrà na-abụkarị nhọrọ dị mma na gburugburu mmiri ma ọ bụ kemịkal.
8. Jiri nlezianya họrọ ngbanwe gị
Ọ bụrụ na ihe ị na-ebu eruola na njedebe nke ndụ ọ na-arụ ọrụ, dochie ihe ị na-eme na nke yiri nke ahụ ma ọ bụ nke ka mma na nke mbụ. Uzo ozo di ala karie ike ida ma nwekwaa ike idota akụrụngwa dị oke ọnụ na ogologo oge.
9. Nlekota oru
Ọ dị obere na ịmị aka ga-ada ada n’enweghị akara akaebe ọ bụla. Oké mkpọtụ ma ọ bụ mmụba nke ịma jijiji ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ pụrụ ịbụ mgbaàmà nke nsogbu ka ukwuu. Ọ bụrụ na eburu na-egosipụta enweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, ọ ga-enyocha ya nke ọma.
10. Kpọọ na ndị ọkachamara
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, chọọ enyemaka nke ọkachamara. A amị ọkachamara ga-enwe ike nye gị ndụmọdụ na nke kacha mma mmezi usoro maka gị kpọmkwem ngwa na ga-enwe ike inyere gị aka ịchọpụta ọ bụla amị nsogbu. O nwere ike ịdị nfe dị ka iziga nsogbu gị na ndị ọkachamara, ndị ga-enyocha ma weghachite nrụgide gị ma achọrọ.